Sarimihetsika fohy mahatsiravina 10 izay hampazoto anao | Famoronana an-tserasera
Manararaotra ny zava-misy fa akaiky ny Halloween ary misy adiny roa amin'ny sasakalina itondrako anao Sarimihetsika fohy mahatsiravina folo ho an'ireo rehetra tia ny karazany. Jereo fa somary manjombona ny sasany amin'izy ireo (indrindra ireo an'ny Swede Sanberg, izay nahasarika ahy manokana).
Raha tsy misy holazaina bebe kokoa, dia avelako ho anao ireo horonan-tsary nampidirina mba hahafahanao mankafy azy ireo mivantana nefa tsy mila mahafoy an'ity lahatsoratra ity ianao. Ankafizo izy ireo!
2 Mom (2008)
5 The Mother (2012)
6 Don´t Mov (2013)
7 Mampatahotra sy Snowy (2013)
Amin'ity fifantenana ity dia izy no nisy fiantraikany indrindra tamiko ary izany no nametrahako azy tamin'ny laharana voalohany. Tsotra izy io nefa miaraka amin'izay dia manafintohina sy manapaka horonantsary fohy izay mahita mora foana amin'ny tahotry ny mpijery. Mbola tsy nampatahotra loatra toy izao ny famonoan'ny jiro. Ny mpanoratra azy, toa ny iray farany amin'ity lisitra ity, dia ny Soedoà iray izay niteraka fahatsapana amin'ny tambajotra sosialy: David Sanberg.
Azo antoka fa maro aminareo no efa nahita ilay sarimihetsika tsy mitonona anarana ary raha mbola tsy nahita dia nanoro hevitra azy aho satria tsy very maina izany. Ny niandohan'ilay sarimihetsika dia tamin'ny sarimihetsika fohy nataon'i Andrés Muschietti, talen'ny razamben'i Arzantina, ary hatramin'ny voalohany dia nahasarika an'i Guillero del Toro izy izay nanolotra avy hatrany ny mpamorona hamorona sarimihetsika manodidina ny taona 2013.
Ny tantaran'ity sombin-javatra ity dia liana liana ary tamin'ny voalohany dia nahita hazavana ho toy ny tena antontan-taratasy momba ny trangan-javatra tsy fantatra. Nisy vehivavy iray, Teresa Fidalgo, niseho imbetsaka teny amin'ny arabe iray any Portugal ary niteraka lozam-pifamoivoizana. Niseho tamin'ny karazana haino aman-jery isan-karazany ity horonantsary ity, avy amin'ny vaovao, tambajotran-tserasera, ary hatramin'ny kaonferansa izay nanandraman'izy ireo nanolotra fitsapana sy fandinihana ny zava-nitranga, raha ny marina dia maro ny mpikaroka paranormal no nilaza fa fanahy io. Na izany aza, ireo fiheverana ireo dia nanome ny fampielezan-kevitra momba ny horonantsary fohy nataon'ny talen'ny David Rebordao antsoina hoe "A Curva" ary misy ireo sary ireo ihany izay efa niparitaka ho tena zava-nitranga. Ny marina dia nahazo mari-pahaizana izy tamin'ny farany, nahavita ny laharana faharoa tao amin'ny Fetiben'ny Sarimihetsika Lisbonne tamin'ny 2003.
Ity sombin-javatra ity dia natokana ary natao manokana ho an'ny tambajotra YouTube ary na dia fohy sy tsotra aza izy io, dia misongadina amin'ny heriny sy ny kalitaon'ny teknika nanatanterahana azy. Ny fampanenoana telefaona tamin'ny misasakalina dia tsy nampatahotra mihitsy. Ny talen'ny anao? Drew Daywalt.
Avy amin'ny tanan'i Beniwood Producciones no misy ity sarimihetsika fohy notarihin'i Alberto Evangelio ity, izay niasa tamin'ny lohateny toa an'i Doncella dormida na La cruz ihany koa. Mahatalanjona ny fandraisana azy amin'ny Internet ary tsy milaza mazava ny synopsis hoe: "Tsy noeritreretiny mihitsy hoe ho tanteraka ny nofy ratsy an-janany ..." Manoro hevitra anao aho mba tsy hanadihady bebe kokoa ary hiditra mivantana amin'ity asa mahafinaritra ity mandritra ny fito minitra satria ny ny marina dia tsy misy fandaniam-poana raha toa ianao ka tia an'io karazana io.
Don´t Mov (2013)
Ity sarimihetsika ity dia nateraky ny tanan'i Anthony Melton tany Angletera ary ny tantarany dia somary lava kokoa noho ny ambin'ireo fohy noresahinay. Ny tohan-kevitr'izy ireo: Mpinamana enina no namoaka demonia rehefa nilalao tamin'ny filankevitry ny Ouija. Mangetaheta ra ilay orinasa fa manafika olona fotsiny rehefa mihetsika. Hotsipahiny tsikelikely izy ireo eo anelanelan'ny famadihana sy ny fitaka.
Mampatahotra sy Snowy (2013)
Dikanteny Japoney tena mahaliana ny angano angano ny zazavavy eo an-joron. Ny horonan-tsarin'ny orinasan'ny Autoway dia manandrana mamorona sehatra mahazatra avy amin'ny sinema mampihorohoro Japoney. Roa lahy no nahita ny tenany teo afovoan'ny arabe tamin'ny misasakalina rehefa sendra sary iray nitovy tamin'ny an'ny vehivavy teo afovoan-dalana izy ireo. Mampatahotra ny vokany. Ny orinasa Japoney dia mikasa ny hampiseho amin'ny fampielezan-keviny ny fihetsiky ny kodiarany amin'ny fotoana tsy ampoizina sy mampidi-doza.
Mpandresy amin'ny fifaninanana Fox Play Horror Month iraisam-pirenena, ary tarihin'i Kolombia Jaime Lince, dia mitantara tantara iray tany am-boalohany izay taratry ny fahasarotan'ny sain'ny olombelona sy ny fomba mety hanakorontanan'ny fiainantsika ny fiainantsika ary hiteraka korontana mafy manoloana ny fatiantoka tsy azo ovaina.
Mitantara tantara iray miaraka amin'ny fikitihana ny nofinofy sy ny foronina. Ny saribakoly porselana dia mampihorohoro ny tovovavy iray ary mampitandrina azy fa mila mibodo vatan'olombelona izy mba ho velona indray. Tsy haiko ny antony fa mampatsiahy ahy ny adihevitra noforonina manodidina ny taona sivy ambin'ny folo miaraka amin'ny andiany toa an'i Gosebumps. Ny talen'i Rachel Tatham.
Araka ny nampitandremako anao tany am-piandohana, hanidy ny lisitray miaraka amin'ny sary mihetsika fohy hafa nataon'i David Sanberg izahay miaraka amina rafitra mitovy amin'ny sary mihetsika fohy izay mitana ny toerana voalohany: tantara tsotra misy fitantarana haingana sy mailaka izay miteraka tahotra marina ao ny vokany. Androany no misy ny tantara ary ao no hahitantsika ny zava-misy amin'ny alàlan'ny efijery finday izay haneho antsika zavatra tsy mahafinaritra. Raha tianao ilay karazana horohoro dia azoko antoka fa hankafizinao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Sarimihetsika fohy mahatsiravina 10 izay hampifoha anao hatrany
MAD Launch dia hoy izy:
Tsy fantatro ny ambiny, fa fantatro kosa?
Valiny amin'ny fanombohana MAD